SBO: Waxabajjii 17 bara 2018. Oduu, Gabaasa Gumaacha WBOf Taasifame ilaallatuu fi Marii Gaazexeessota Oromoo Waliin Taasifame -Kutaa 3ffaa. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSBO: Waxabajjii 17 bara 2018. Oduu, Gabaasa Gumaacha WBOf Taasifame ilaallatuu fi Marii Gaazexeessota Oromoo Waliin Taasifame -Kutaa 3ffaa.
Seenaa Barsiisaa Abdiisaa Fufaa (1943-2018)
Barsiisaa Abdiisaa Fufaa abbaa isaa obbo Fufaa Cirreettii fi haadha isaa aadde Duree Deebisaa irraa konyaa Horroo Guduruu Aanaa Amuruu Qalaafa addaa Affallii jedhamtutti bara 1943tti dhalate.
Umuriin isaa barumsaaf akka ga’een mana barumsaa Mishinii Kiiramuutti bara 1961 eegaluun hanga 1964tti barumsa irra ture bara 1965, 1966, 1968,hojjetaa miishinii ta’uun waggoota sadiif hojii barsiisummaatiin tajaajileera.
Haala waliigala barnoota isaan walqabatee:
kutaa1-5tti mana barumsaa Dhaabbata Mishinii Kiiramuutti sadarkaadhaan barate.
Kutaa6ffa mana barumsaa Amuruu fuliyyeetti
Kutaa7-8tti mana barumsaa Giddu-Galeessa sadarjaa 2ffaa shaambuutti Kutaa9-12tti bara 1966-1972tti mana barumsaa shaambuutti baratee qabxii olaanaa sagantaa barnoota digiriif hafeeru argatee. Gamaa biroottin immoo yuuniversitii Finfinne kiiloo 6 sagantaa gannaan waggoota ja’aaf Bulchiinsa barnootaa ergaa baratee booda qabxii olaanaa galmeessiseen Pr Indiriyaas Isheetee perezedaantii Yuuniversitii Finfine harkaa badhaasa medaaliyaa fudhatee eebbifameera.
Sadarkaa digiriitiinis Adimaas yuuniversitti koollejjitti sagantaa barnoota fagoon Ijoo karooraa fi Bulchiinsa barnootaa Mineriin Afaan Ingiliziin qabxii olaanaa galmeessisuun baatii amajii bara 2003 eebbifameera.
Barsiisaa Abdiisaan dhalatee waggaa 28tti haadha mana isaa qeerrummaa aadde Curqii Galaan waliin bara 1970 gaa’ela raawwate.
Barsiisaa Abdiisaan abbaa ilmaan shanii fi dubara lamaati. Walii gala abbaa ijoollee toorbaatti.
Barsiisaa Abdiisaan hayyuu mataa isaaf utuu hin ta’iin dhalootaaf bu’aa buuseef darbedha.kanaafuu maqaan isaa seenaa duratti bara baraan yaadatama.
Barsiisaa Abdiisaan jaarsa haraaraa,dhala namaa addaan kan hin qoodne,goota waan dubbateef hin sodaanne,hooggansa beekumsa irratti hundaa’r kan kennu, qaxalee hojii lakkaa’ee laatee lakkaa’ee fudhatu hojii isaaf lakkaa’amee kennames lakkaa’ee deebisuudha.
Barsiisaa Abdiisaan xiiqa’aa,doorsisa garee kamiifuu kan hin jilbeeffanne,dhiibbaa uummata oromoorra ga’u jala dhaabbatee karaa nagaa fi nagaa qofaan mirga uummata oromoof hayyuu qabsaa’u,ejjennoo dhaabbataa qabeessa qindeessaa sirna Gadaa,xiinxalaa siyaasaa fi abbaa foolleeti.
Barsiisaa Abdiisaan obsa qabeessa,nama jaalalaa, hojii keessatti nuffee fi dadhabee kan hin beekne, ba’aa itti kenname hunda baachuuf ga’umsa qabeessa,mana qorannoo fi qo’annoo,beekaa rakkoo adda baasee kallattii furmaataa kaa’uu, amanamaa,gocha kiraa sabsaabdummaa irraa hayyuu bilisa ta’e,waggootta 44f bifa dhokataa fi iccitawaa ta’een hayyuu bilisummaa uummata oromoof karaa walirraa citinsa hinqabnen qabsaa’e waggoota caqafamaan kana keessatti haantummaa uummataa keessa ta’ee rakkoon uummata oromoo hikkamee fi dhugoomsee lafa qabsiisuuf haarsaa boonsaan iinni qabatamman kaffale dhala oromoo kamiyyu jalaa dhokachuu kan hin dhandeenye godaannisa bara baraati.
Barsiisaa Abdiisaan xiinxalaa siyaasaa oftuulummaa fi dhiphummaa tokko malee dhaloota qubee siyanaa kallatti ittin uummanni oromoo guutuuf guutummaatti bilisoomee tokkummaa fi jaalalaan inni ittin jiraatu hayyuu hubachiisedha.
Barsiisaa Abdiisaan utuu dhukkubsatee badada adda addaa hin argatiin du’an tasaa dhalatee waggaa 68tti gaafa 07/10/2010 du’aan addunyaa kanarraa boqoteera.
Sirni awwaala issas hiriyyoonni isaa,hojjettoonni miiltoo hojii isaa,firoonni dhiigaa,hawaasni bal’aanni fi maatiin isaa bakka argamaanitti gadda guddaa dhaan bakka awwaalaa Waldaa kiristoos Andinnetii Kiiramuutti gaafa guyyaa 09/10/2010 sa’a 5:30 tti rawwatameera.
Maattii isaatiif jajjabinni haatahu!
Bakki dhaloota isaa liibano qarqara.
Takka takka It/A takka daarikteera
Ciicata funaanee qindeessaa karooraa
Magaalaan aanaa isaa maqaan ishee oborraa
Waldiddaa namootaaf hojiin isaa haraaraa
Namichi kun eenyu anoo nan wallaalee?
Takkaa namaa hinsarmuu waan garaa isaa malee
Tasa hin hoofamu ejjennoo qabeessa
Waltajjii barnootaas ga’umsaan gaggeessaa
Namaa hin sossobamu namni kun ogeessaa
Joogiraafi seenaa walfaana tarreessaa
Afanota sadan seerluuga barsiisaa
Saayinsii Uumamaa arfan ni leenjisaa
Nama kana beektuu xiinxalaa siyaasa?
Nama kana beektuum tasa hin wallaltanii
Jaalallee hawaasa qananii Mishinii
Guddisa Piristii turjumaana Daanii
Nama kana beetuu tasa hin wallaaltanii
Maqaan isaa Abdiisaadhaa yoo na gaafattannii
Qabsoo kennee sokkee haadhaqu nagaanii
Wanti hundi sirratee yoomi kan walgituu?
Jedhee isa qabsaa’uu Abdiisaadhaan beektuu
Dhimmi dhengadda mandiitti ta.e yaddessaadha dubbiin sun akkana,
Namichi kora bittineessaa dursu bitamtuu diinaa kan taate kumander Fiqruu Tufaa ykn Mashaal kan jedhamu sun dhengadda Magaalaa #Asoosaa ture gaafa ,gaafa sanas gantuun wayyanee #Abay_Xayye Hoteela #BaambuuIsa Asoosa qabatee ture achitti walarguun dhimma oromoo diigu irratti mari.achaa akka turan namoonni ijaan argan gabaasanii jiru,ammas taanan oromoon dubbii diinni shira xaxaa jirtu kana adda baafachuun socho.u akka qabu dhamsa oromummaa keenyaati.”